Wasaaradaha internetka - Waa kuwee kaniisadaha Masiixa?
Yaa kaniisadaha Masiixa ah?
Taariikhda Taariikhda Dhaqdhaqaaqa Dib u Dhiska
Mid ka mid ah u doodayaasha ugu horreeya ee ku soo noqoshada Axdiga Cusub ee Masiixiga, oo ah hab lagu gaaro midnimada midnimada rumaystayaasha Masiixa, wuxuu ahaa James O'Kelly oo ka tirsan Kaniisadda Epistopal ee Methodist. 1793 wuxuu ka soo baxay shirkii Baltimore ee kaniisaddiisa wuxuuna ugu baaqay dadka kale inay ku soo biiraan isaga oo u qaadanaya Kitaabka Qudduuska ah. Saameyntiisa waxaa badanaa lagu dareemay Virginia iyo North Carolina halkaas oo diiwaanada taariikhda ah ee toddoba kun oo qof oo isgaadhsiin ah ay raaceen hoggaankiisa si loogu celiyo Axdiga cusub ee Axdiga Cusub.
In 1802 dhaqdhaqaaq la mid ah Baabtiisayaasha ee New England waxaa hogaaminayay Abner Jones iyo Elias Smith. Waxay ka walwalsan yihiin "magacyo iyo caqiidooyin" waxayna go'aansadeen in ay xirtaan magaca Masiixiga oo keliya, iyagoo Kitaabka Quduuska ah u qaata sida hagahoodu kaliya. 1804, gobolka galbeed ee gobolka Kentucky, Barton W. Stone iyo qaar kale oo wacdiyayaal ah ayaa waxay qaadeen tallaabooyin isku mid ah oo sheegaya in ay Kitaabka Quduuska ah u qaadan lahaayeen "hage xaqiiqo ah oo jannada ku jira". Thomas Campbell, iyo wiilkiisii ​​caanka ahaa, Alexander Campbell, waxay qaadeen talaabooyin isku mid ah sanadka 1809 ee hadda waa gobolka West Virginia. Waxay ku nuuxnuuxsadeen in aan midna lagu xidhin masiixiyiin sida arrin la xidhiidha caqiido aan sida hore u ahayn Axdiga Cusub. Inkasta oo afartan dhaqdhaqaaqoodi ay si buuxda u madaxbannaan yihiin bilawgoodii waxay ugu dambeyntii noqdeen dhaqdhaqaaq xoogan oo xoogan sababtoo ah ujeedadooda caadiga ah iyo qirasho. Nimankan ma aysan u doodin bilowga kaniisad cusub, laakiin waxay ku noqonaysaa kaniisaddii Masiixa sida ku xusan Kitaabka Quduuska ah.
Xubno ka tirsan kaniisadda Masiixa maaha mid naftooda u adeegsanaya sida kaniisad cusub oo bilowday bilowga qarnigii XNUM. Halkii, dhaqdhaqaaqa oo dhan waxaa loogu talagalay inuu soo saaro wakhtiyo casriga ah ee kaniisad asal ahaan asaasay Bentakost, AD 19. Awoodda rafcaanku waxay ku jirtaa dib u soo celinta kaniisadda asalka ah ee Masiixa.
Waa ugu horrayn qirasho midnimo diineed oo ku salaysan Kitaabka Qudduuska ah. Dunida diineed ee la qaybiyey waxaa la aaminsan yahay in Kitaabka Qudduuska ahi yahay kan keliya ee suurtogalka ah ee suurtogalka ah ee ugu badan, haddii aaney dhammaan, dadka ka cabsanaya ee dalka ka mid ah. Tani waa rafcaan ay ku noqonayso Kitaabka Qudduuska ah. Waa codsi in la hadlo meeshii Kitaabka Quduuska ah la hadlo oo ay iska aamusaan halka Kitaabka Quduuska ah uu ka aamminsan yahay arrimaha ku saabsan diinta. Waxa kale oo ay xooga saaraysaa in wax walba oo diin ah ay jiraan "Waa sidaas Sayidka" oo dhan wixii la sameeyo. Ujeedadu waa midnimada midnimada rumaystayaasha Masiixa. Saldhigga waa Axdiga Cusub. Habkani waa dib u soo celinta Axdiga Cusub ee Masiixiga.
Qiyaasta ugu dhow ee la isku hallayn karo waxay ka badan tahay kaniisadaha Masiixa ee 15,000. "Christian Herald", oo ah daabacaad diineed oo guud oo soo bandhigaysa tirakoobyada kaniisadaha oo idil, ayaa qiyaasaya in xubnaha guud ee kaniisadda Masiixu hadda yahay 2,000,000. Waxaa jira dad ka badan 7000 ragga oo si cad u wacdiya. Xubinnimada kaniisadda ayaa ugu culus gobolada koonfurta ee Maraykanka, gaar ahaan Tennessee iyo Texas, inkastoo kaniisadaha ay ka jiraan mid kasta oo ka mid ah konton gobol iyo in ka badan sideed dal oo ajnabi ah. Ballaarinta Hawlgalka ayaa ah mid aad u ballaaran taniyo dagaalkii labaad ee adduunka ee Europe, Asia iyo Africa. In ka badan shaqaalaha 450 shaqeeya waqti buuxa ayaa lagu taageeraa wadamada shisheeye. Kaniisadaha Masiixa waxay hadda leeyihiin shan jeer tirada xubnood ee laga soo sheegey tirakoobka diinta Mareykanka ee 1936.
Ka dib qorshaha ururkii laga helay Axdiga Cusub, kaniisadaha Masiixa waa madaxbannaani. Rumaysadka caadiga ah ee Kitaabka Qudduuska ah iyo raacitaanka waxbaristiisa ayaa ah xiriirka ugu weyn ee isku xidhaya. Ma jiro xarun dhexe oo kaniisad ah, mana jirto hay'ad ka sarreysa oday-dhaqameedyada urur kasta. Wadashaqayntu waxay si iskaa-wax-u-qabso ah u taageeraan agoonta iyo waayeelka, iyagoo wacdiyaya injiilka cusub ee shaqada, iyo shaqooyinka kale ee la midka ah.
Xubnaha kaniisadda Masiixa waxay qabtaan afartan jaamacadood iyo dugsiyo sare, iyo sidoo kale toddobaatan carruur ah oo agoonta iyo guryaha loogu talagalay dadka da'da ah. Waxaa jira qiyaastii 40 joornaalada iyo waqtiyo kale oo ay daabacaan xubnaha shakhsiyaadka kaniisadda. Barnaamijka raadiyaha iyo telefishanka ee dalka oo dhan, oo loo yaqaan "The Herald of Truth" ayaa waxaa maalgaliya Kaniisadda Highland Avenue ee Abilene, Texas. Inta badan miisaaniyadda sanadlaha ah ee $ 1,200,000 waxaa lagu saleeyay saldhig bilaash ah kaniisadaha kale ee Masiixa. Barnaamijka raadiyaha waxaa hadda lagu dhegeystey in ka badan xarumo raadiyaha 800, halka barnaamijka telefishinka uu hadda ka muuqdo xarumo 150. Raadiyaha kale ee ballaaran ee loo yaqaan "World Radio" ayaa leh shabakado xarumaha xarumaha 28 ee Brazil oo kali ah, oo si firfircoon uga shaqeynaya Maraykanka iyo waddamo kale oo ajnabi ah, waxaana lagu soo saaraa luqadaha 14. Barnaamijka xayeysiiska ee ballaaran ee joornaalada qaranka ee qaranka ayaa bilaabmay Bishii 11aad ee 1955.
Ma jiraan heshiisyo, shirar sanadle ah, ama daabacaad rasmi ah. "Xirfaddii ciriirisay" waa midka midka ah ee daacad u ah mabaadii'da dib u soo celinta Axdiga Cusub ee Masiixiga.
Urur kasta, kaas oo jirey waqti dheer si uu si buuxda u abaabulo, waxaa jira tiro badan oo waayeel ah ama madax-ilaaliye kuwaas oo u adeega sida guddiga maamulka. Raggaas waxaa soo xushay ururrada maxaliga ah iyagoo ku saleysan aqoonta ku qeexan Qorniinka (1 Timothy 3: 1-8). Adeegyada waayeellada waa macallin, macallin, iyo wacdiyayaal ama wasiirro. Kama dambaysta ma laha awood u siman ama ka sarreeya odayaasha. Odayaashu waa adhijirro ama kormeerayaal ku hoos jira madaxnimada Masiixa sida ku xusan Axdiga Cusub, kaas oo ah dastuur. Ma jiro awood dhuleed oo ka sareeya odayaasha kaniisadda maxalliga ah.
Qoraalada asalka ah ee lixda buug ee lixda buug ee ka samaysan qoraallada Kitaabka Quduuska ah ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin waxyi loo adeegsaday, taas oo macnaheedu yahay inay yihiin kuwo aan la shariik ahayn oo awood u leh. Tixraacidda Qorniinka waxa lagu sameeyaa dejinta su'aal kasta oo diineed. Baybalku wuxuu ka dhigan yahay erayga ugu dambeeya. Kitaabka aasaasiga ah ee kaniisadda iyo saldhiggiisuna waa wacdinta Kitaabka Qudduuska ah.
Haa. Bayaanka Ishacyaah 7: 14 waxaa loo qaaday sidii wax sii sheegidda dhalashada Masiixa. Qoraallada New Testament sida Matthew 1: 20, 25, waxaa lagu aqbalaa qiimaha wajiga sida cadeynta dhalashada bikradda ah. Masiixa waa la aqbalaa oo ah Wiilka keliya ee Ilaah ka yimid, isaga oo ku midoobaya shakhsiyadiisa oo kaamil ah oo wanaagsan.
Kaliya marka la eego in Ilaah Ilaahay u soo saari doono kuwa xaqa ah si ay u noqdaan kuwo badbaado iyo kuwa aan xaqa ahayn inay weligood lumaan. Rasuulka Rasuulka Butros: "Runtii waxaan garanayaa inaan Ilaah dadkiisa u ducayn, laakiin dad kasta oo isaga ka cabsada oo xaqnimo sameeya waa la aqbali doonaa" (Falimaha 10: 34-35.) caddaynta in Ilaah uusan horay u shaacin shakhsiyaadka si ay u noqdaan kuwo badbaaday ama lumay, laakiin in nin kastaa go'aaminayo jihadiisa.
Ereyga baabtiisku wuxuu ka yimid erayga Giriigga ah "Baabtiisaha" macno ahaanna macnihiisu waxa weeye, "si aad u gaabisid, si aad u gaabiso, si aad u foorarsato." Marka lagu daro micnaha macnaha ereyga, macneheedu waa waxa lagu dhaqmaa maxaa yeelay waxa ay aheyd dhaqanka kaniisadda wakhtiyada apostolic times. Hase yeeshee, imminka keliya ayaa ku habboon qeexitaanka sida baabtiisyada sida ku jirta Rasuulka Bawlos ee Roomaanka 6: 3-5 halkaasoo uu ka hadlayo sida aasaaska iyo sarakicidda.
Maya. Kaliya kuwa gaadhay "da'da xisaabtanka" waxaa loo aqbalaa baabtiisyada. Waxa lagu tilmaamay in tusaalooyinka lagu sheegay Axdiga Cusubi ay yihiin kuwa had iyo jeer maqlaya injiilka ku wacdiyay oo rumaystay. Rumaysadku waa inuu markasta ka hor baabtiisaa baabtiiska, sidaas oo kaliya dadka waawayn ee ku filan inay fahmaan oo rumaystaan ​​injiilka in loo arko maadooyin munaasab ah loogu talagalay baabtiiska
Maya. Wasaaradaha ama wacdiyayaal kaniisadda ah ma leh wax khaas ah oo gaar ah. Ma ay xiran yihiin magaca Reverend ama Aabbaha, laakiin waxaa lagu soo hagaajiyaa ereyga walaalaha ah walalaha kale ee kaniisadda. Iyaga oo ay weheliyaan waayeellada iyo dadka kale waxay talobixin ku sameeyaan oo ay ku wargeliyaan kuwa raadsada caawimo.